Ubunjineli beCAD. Iprojekti yobunjineli bombutho
Ukufunyanwa kwe-SPIDA Software Bentley Systems, Incorporate (Nasdaq: BSY), inkampani yesoftware yobunjineli, namhlanje ibhengeze ukufunyanwa kwesoftware ye-SPIDA, abaphuhlisi besoftware ekhethekileyo yoyilo, uhlalutyo kunye nolawulo lweenkqubo zeepali. Yasekwa ngonyaka ka-2007 eColumbus, eOhio, i-SPIDA ibonelela ngezisombululo zesoftware yokwenza imodeli, ukulinganisa ...
Geospatial - GIS, Zobunjineli, ezintsha
Nge-7,8 kaSeptemba, 9 kunye ne-XNUMX yalo nyaka, "ii-UAV Expo Americas" ziya kubanjelwa eLas Vegas Nevada - e-USA. Yimboniso yorhwebo ekhokelayo eMntla Melika kunye neenkomfa ezijolise kudityaniso lwentengiso kunye nokusebenza kunye nababonisi abaninzi kunawo nawuphi na umsitho wentengiso yedrone. Igxininisa imixholo ...
GPS / Izixhobo, Zobunjineli, ezintsha
Ingqondo yeRobotic yeLogic
Ukusuka kuyilo lwe-CAD ukulawula ngesoftware enye Fuzzy Logic Robotic yazisa ukubonakaliswa kwenguqu yokuqala yeFuzzy Studio ™ kwiHannover Messe Industry 2021, eya kuphawula ukujika kwimveliso yerobhothi eguqukayo. ➔ Ukurhuqa kwaye ulahle iinxalenye ze-CAD kwi-3D yakho yamawele edijithali ...
Zobunjineli, ezintsha, Ezahlukeneyo
UGersón Beltrán woHlelo lwesi-5 lweTwingeo
Wenza ntoni ummi welizwe? Kudala sifuna ukunxibelelana nomntu ophambili kolu dliwanondlebe. UGersón Beltrán uthethe noLaura García, oyinxalenye yeqela leGeofumadas kunye neTwingeo Magazine ukunika umbono wakhe malunga nexesha langoku nekamva le-geotechnologies. Siqala ngokumbuza ukuba wenza ntoni ngeJografi kwaye ukuba - njengabaninzi ...
Geospatial - GIS, Zobunjineli
Udliwanondlebe noCarlos Quintanilla-QGIS
Sithethile noCarlos Quintanilla, umongameli wangoku woMbutho weQGIS, osinike ingxelo yakhe malunga nokunyuka kwemfuno yemisebenzi enxulumene ne-geosciences, kunye noko kulindeleke kubo kwixesha elizayo. Akusiyo imfihlo ukuba iinkokheli ezininzi zobuchwephesha kumacandelo amaninzi -ukwakha, ubunjineli, kunye nezinye-, “i…
Zobunjineli, ezintsha, qgis
I-Bentley Systems ibhengeze ukumiliselwa kokunikezelwa esidlangalaleni kwezabelo ezili-10,750,000 zezabelo eziqhelekileyo zeCandelo B. Izabelo eziqhelekileyo zeBanga B. Abanini zabelo abathengayo banethemba lokunika abo baphantsi kwabo ekunikezeleni ukhetho lweentsuku ezingama-30 ...
Geospatial - GIS, Zobunjineli, Microstation-Bentley
I-Leica Geosystems ibandakanya iphakheji entsha yokuskena i-laser ye-3D
Isikena seLeica BLK360 Iphakheji entsha ineskena seLaica BLK360 ye-laser imaging, iLeica Cyclone BHALISA isoftware yedesktop ye-360 (uHlelo lweBLK) kunye neLeica Cyclone FIELD 360 yeetafile kunye neefowuni. Abathengi banokuqalisa kwangoko ngonxibelelwano olungenamthungo kunye nokuhamba komsebenzi kwiimveliso zokubamba eziyinyani ...
I-UltraCam Osprey 4.1 Imifanekiso ye-Vexcel yazisa ngokusungulwa kwesizukulwana esilandelayo i-UltraCam Osprey 4.1, ifomathi enkulu ehambelana kakhulu nokuqokelela ngaxeshanye imifanekiso ye-photogrammetric grade nadir (PAN, RGB kunye ne-NIR) kunye nemifanekiso ye-oblique (RGB). Ukuhlaziywa rhoqo kwizinto ezibukhali, ezingenangxolo nezichanekileyo kakhulu ...
I-Photogrammetry imifanekiso izixhobo ezikude Vexcel
cadastre, Geospatial - GIS, GPS / Izixhobo, Zobunjineli, ezintsha, Ezahlukeneyo
I-EBentley Institute Press, umpapashi weencwadi zokufunda ezisemgangathweni kunye nemisebenzi yokubhekisa kwezobuchwephesha yokuqhubela phambili ubunjineli, uyilo, ulwakhiwo, ukusebenza, indawo yokuhlala kunye nemfundo, ubhengeze ukubakho kothotho olutsha lweempapasho ezinesihloko esithi "Ngaphakathi Ushicilelo lweMicrosoftStation CONNECT ", ngoku iyafumaneka ngokuprintwa apha nanjenge-e-ncwadi ...
AutoCAD-AutoDesk, Ukufundisa i-CAD / GIS, Zobunjineli, IntelliCAD, Microstation-Bentley
Iziseko zophuhliso yimfuno eqhelekileyo namhlanje. Sisoloko sicinga ngezixeko ezi-smart okanye zedijithali kwimeko yezixeko ezikhulu ezinabemi abaninzi kunye nomsebenzi omninzi onxulumene nezixeko ezikhulu. Nangona kunjalo, iindawo ezincinci zifuna iziseko zophuhliso. Inqaku kwinto yokuba ayisiyiyo yonke imida yezopolitiko ephela kumgca wendawo, ...
Iidolophu zedijithali- singazisebenzisa njani iitekhnoloji ezinje ngeSIMEMENS
Udliwanondlebe lweGeofumadas eSingapore no-Eric Chong, uMongameli kunye ne-CEO, u-Nokia Ltd. Njani i-Nokia yenza kube lula kwihlabathi ukuba nezixeko ezikrelekrele? Zithini ezona minikelo zakho ziphambili ezivumela oku? Izixeko zijongene nemiceli mngeni ngenxa yotshintsho oluziswe yimetgatrends yokufudukela kwabantu ezidolophini, utshintsho lwemozulu, ubumbano lwehlabathi kunye nobume babantu. Kuko konke ukuntsokotha kwabo, bavelisa ...
BIM egeomates My
I-AulaGEO sisindululo soqeqesho, esekwe kububanzi beGeo-engineering, ngeebhloko zemodyuli kulandelelwano lweGeospatial, Ubunjineli kunye nokuSebenza. Uyilo lweendlela lusekwe "kwiikhosi zeNgcali", ezijolise kubuchule; Kuthetha ukuba bajolise kukuziqhelanisa, ukwenza imisebenzi kwimeko ebonakalayo, ngakumbi imeko yeprojekthi enye kunye ...
AutoCAD-AutoDesk, Iiphotography, cadastre, Izifundo ze-AulaGEO, Ukufundisa i-CAD / GIS, Geospatial - GIS, Google umhlaba / imephu, Zobunjineli, Microstation-Bentley, qgis
Ubunjineli beGeo-TwinGeo Magazine-uHlelo lweSibini
Besihleli umzuzu onomdla wotshintsho lwedijithali. Kuzo zonke iindlela zokuziphatha, utshintsho lwedlula ukushiya iphepha ngokulula ekwenzeni iinkqubo zibe lula kukhangela ukusebenza kakuhle kunye neziphumo ezingcono. Icandelo lokwakha ngumzekelo onomdla, oqhutywa zizikhuthazi kwangoko ezinje nge-Intanethi ...
Geospatial - GIS, Zobunjineli, egeomates My
Iindaba zeGeo-Engineering-Unyaka kwiziseko zophuhliso-YII2019
Kule veki, iNkomfa yoNyaka yeziSeko zoPhuhliso-i-YII 2019 ibanjelwe eSingapore, owona mxholo uphambili ujolise ekuqhubeni kwidijithali ngendlela yamawele edijithali. Umsitho ukhuthazwa ziiNkqubo zeBentley kunye namahlakani acwangcisiweyo eMicrosoft, iTopcon, iAtos kunye neNokia; kumanyano olunomdla endaweni ye ...
Zobunjineli, ezintsha, Microstation-Bentley
Ukuchaza kwakhona uMxholo we-Geo -unjineli
Siphila umzuzu okhethekileyo kwindibano yoqeqesho iminyaka sele yahlulwe. Uphando, uyilo loyilo, ukuzoba umgca, uyilo lolwakhiwo, uyilo, ulwakhiwo, ukuthengisa. Ukwenza umzekelo wento ebihamba ngesiqhelo; Linear yeeprojekthi ezilula, ukuphindaphinda kwaye kunzima ukulawula kuxhomekeke kubungakanani beeprojekthi. Namhlanje, ngokumangalisayo ...
AutoDesk Bentley Systems BIM egeomates My
I-STAAD-ukuyila iphakheji yoyilo ebiza iindleko ezenzelwe ukumelana noxinzelelo lolwakhiwo- eNtshona India
Ime kwindawo ephambili yaseSarabhai, i-K10 Grand sisakhiwo seofisi esisisiseko esimisela imigangatho emitsha yendawo yorhwebo eVadodara, Gujarat, India. Indawo ibone ukukhula ngokukhawuleza kwezakhiwo zorhwebo ngenxa yokusondela kwisikhululo seenqwelomoya kunye nesikhululo sikaloliwe. I-K10 iqeshe abacebisi be-VYOM njengo ...
Kungolwaneliseko olukhulu ukuba sibhengeza ukumiliselwa kwephephancwadi lobunjineli beGeo kwilizwe leSpanishi. Iya kuba nexesha elinamaxesha ngekota, ityebise uhlelo lwedijithali lomxholo wemultimedia, ukhuphele kwi-pdf kunye nohlobo oluprintiweyo kwiminyhadala ephambili egutyungelweyo ngabo baphambili kuyo. Kwibali eliphambili lolu hlobo, igama elithi Geo-engineering litolikwa kwakhona, ngoluhlobo ...
IGeofumadas ithathe inxaxheba kwesinye seziganeko ezibaluleke kakhulu zamanye amazwe ezinxulumene ne-BIM (iZakhiwo zoLwazi lweZakhiwo), yayiyiNgqungquthela ye-BIM yaseYurophu 2019, eyayibanjelwe kwi-AXA Auditorium kwisixeko sase-Barcelona-Spain. Lo msitho wandulelwa ngamava e-BIM, apho kunokwenzeka ukuba ube nembono yoko kuza kubakho ngeentsuku ...
Page 1 Page 2 Page 3 ... Page 5 kwiphepha elilandelayo
Le khosi ye-AulaGEO ifundisa ukusetyenziswa kweRevit kwimodeli, uyilo kunye nokubala iinkqubo zombane. Uya kufunda ...